Nkụzi nkuzi ụlọ akwụkwọ mbụ | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Nkuzi nkuzi ulo akwukwo
Ọ bụ ezie na ọnọdụ Covid ka edoghị anya, thelọ Ọrụ Nkụzi -lọ akwụkwọ na-aga n'ihu na-enye ngwugwu ngwakọta nke ntinye aka na nkwado ekwentị, nkuzi nkuzi vidiyo, ọzụzụ na ụfọdụ nleta nleta na ụlọ akwụkwọ ọta akara. Anyị ga-aga n'ihu na-agbaso nduzi gọọmentị ma melite nchịkọta nkwado anyị n'usoro ndụmọdụ kachasị ọhụrụ.
Nwere ike ịchọta ọtụtụ ozi na-enye aka na weebụsaịtị a, gaa lelee ngalaba AJESJ for anyị maka nkuzi echiche na vidiyo.
Nkwado Mpaghara dị ugbu a
Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ Barnet's Local Offer https://www.barnetlocaloffer.org.uk/
Inyere ezinne n'oge oyi a: https://www.barnet.gov.uk/sites/default/files/helping_families_this_winter.pdf​
Enwere ozi gbasara ihe Childrenlọ Ọrụ Childrenmụaka nke mpaghara gị na-enye .... lee Oge Oge Oge Oge. I nwekwara ike ịchọta ozi ebe a: https://www.barnetlocaloffer.org.uk/pages/home/information-and-advice/early-years/children-s-centres
Ozi maka ịkwado ahụike na ahụike gị. https://www.barnetwellbeing.org.uk/. Enwere Atụmatụ Nchekwa nke nwere ike ịmasị.
Sangam Center dị na Burnt Oak na-enye ọtụtụ ndụmọdụ na ọrụ nkwado - gụnyere ndụmọdụ na ikike ikike ọdịmma. Biko lee flier: Mpempe Ozi Ama Ihe Sangam (PDF)
Ọ nwere ike ịmasị ezinụlọ na Silkstream na Fairway Childrens Center nwere ọba akwụkwọ egwuregwu ụmụaka - biko lee flier: Librarylọ akwụkwọ egwuregwu ụmụaka 2021 (PDF).
Homestart bụ ọrụ ebere nke na-enye ezinụlọ dị na Barnet nkwado na mmetụta dị irè. Ha na eme ihe omume emebere nke oma - oge akuko, oge egwu na-etolite ma too - nke ezi n’ulo ichoro ibanye. Biko lee flier: Oge Ime Ihe Omume Nke Oge (PDF)
Barnet Childrens Integrated Therapies (CIT) na - agba akwụkwọ maka ndị nne na nna na - akwụghị ụgwọ n’ọtụtụ isiokwu gụnyere inyere ụmụaka aka ịzụlite ikike dị mma nke moto ha, ntọala nke nkwukọrịta, ịkwado ụmụaka nwere nsogbu mmekpa ahụ. Biko lee flier: Barnet si CIT nkuzi nkuzi nke ndị nne na nna (PDF)
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhapụ anyị ozi, biko jiri adreesị ozi-e admin@pstt.barnetmail.net ma ọ bụ ozi olu otu otu na 020 8361 2456 (Ext. 1). A ga-enyocha ozi site n'oge ruo n'oge ma onye ọ bụla ga-abịaghachikwute gị ozugbo enwere ike.
Nabata na weebụsaịtị Weebụsaịtị nkuzi
Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ozi gbasara ọrụ anyị na otu anyị si akwado ụmụaka nwere mkpa ọzọ na ezinụlọ ha na Barnet.
Otu ndi nkuzi nke Barnet bu ulo oru ntinye aka nye umuaka ndi nwere mmuta na nkuzi di iche iche. Anyị na-enye ọkachasị nkwado izi ihe n'ụlọ na-enyere ụmụaka nọ n'okpuru afọ 5 bi na London Borough nke Barnet. Ndi otu ndi nkuzi nke ulo akwukwo bu ndi oru aha.
Ndị otu nkuzi na-aga n'ihu na-enye aka maka ụmụaka na-egosi ụfọdụ oge igbu oge ma ọ bụ ihe isi ike na mmepe ha. Ebumnuche anyị na ndị nne na nna na ndị nlekọta na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nyere ụmụaka aka inwe ọganiihu. Site na ozi dị na nzukọ ntinye akwụkwọ nke ọtụtụ, a ga-eme mkpebi na Teamlọ Ọrụ Nkụzi -lọ Akwụkwọ nwere ike ịrụ ọrụ n'ịkwado nwatakịrị. Ozi banyere otu esi ezo aka na anyị nwere ike ịchọta na Kpọtụrụ Anyị ngalaba.
Tdị Nzaghachi PsTT
Anyị nwere mmasị n'echiche gị banyere ibe weebụ a na ozi ọ na-enye. Biko jiri bọtịnụ ndị dị n'okpuru ka ha dị anyị.
Kedụ ka ị ga-esi were webụsaịtị anyị?(*)
Biko kwupụta echiche gị site na ịhọrọ bọtịnụ
Daalụ maka nzaghachi gị!
* Biko mara na njikọ ụfọdụ chọrọ Adobe Acrobat Reader a ga-ele ya anya.